Waxaa jira waardiye wanaagsan oo ka shaqeeya meesha aan deganahay. Wuu i caawiyaa wuxuuna ii fududeeyaa in aan wax baddan sameeyo. Laakiin shalay wuxuu si ku cel-celis ah u taabtay jirkayga. Anigu midaasi ma jeclaysan. Maxaa ila gudboon in aan sameeyo? – Tips for refugees
Previous Previous post: Waxaa la igu leeyahay dayn aad u baddan midaas oo aan galay safarkaygii aan waddankaan usoo socday. Waxaa la iga rabaa in aan shaqeeyo waana cabsanayaa. Qofkee i caawin kara?
Next Next post: Anigu waxaan ahay wiil 13-sanno-jir ah inta lagu guda jiray safarkii aan usoo socday waddankan waxaan la safray labbo nin. Waxay igu sameeyeen waxyaabo la yaq-yaqsado. Anigu hadda miyaan ahay khaniis?